သံစဉ်ပြုလုပ်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းရေး ကိုယ်ပိုင်သီဆိုနိုင်သူများ နှင့် Cartoon Digital Painting ရေးဆွဲနိုင်သည့်သူများကိုခေါ်ယူခြင်း။
Home » Jobs » Employer Job Offer » သံစဉ်ပြုလုပ်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းရေး ကိုယ်ပိုင်သီဆိုနိုင်သူများ နှင့် Cartoon Digital Painting ရေးဆွဲနိုင်သည့်သူများကိုခေါ်ယူခြင်း။
Address: No. 686/698,Room No42, Quarter , 4th Floor, Maharbandoola Road , Latha Township , Yangon.
Contact Number: 09262302069
Email Address: psmyanmar14@gmail.com
Listed: August 10, 2015 8:24 pm
– Faith,Inc Co.,ltd သည် Smartphone Ringtone ၊ ကွန်ပျူတာ ၊ ဂိမ်းပစ္စည်းများ ၊ TV ၊ Network audio စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်နေသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။
– ၄င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံပေါင်း၁၀၀သို့ ဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိပြီ ယခုအခါအမျိုးမျိုးသော ဆန်းသစ်တီထွင်မူများကို ပိုမိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံစဉ် ၊ သီချင်း ၊ Cartoon စသည်တို့၌ ဝါသနာပါသော သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။
– လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကျားမ ၊ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်　မရှိဘဲ မည်သူမဆို　လာရောက်　လျှောက်ထား　နိုင်ပါသည်။
– လျှောက်ထားသူများသည် မိမိ　ပြုလုပ်ထားသော သံစဉ် ၊ သီချင်း ၊ Cartoon စသည်တို့ကို ယူဆောင်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ PS Myanmar Co.,ltd မှ Faith,Inc Co.,ltd သို့ ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
– ပေးပို့လိုက်သော သံစဉ် ၊ သီချင်း ၊ Cartoon စသည်တို့ကို Faith,Inc Co.,Ltd မှ ကြိုက်နှစ်သက်　ပါက　ကာယကံရှင်များနှင့် ပိုမို ဆွေးနွေး မေးမြန်းနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့　လာရောက်မည်။
Ad Reference ID: 75055c875323d402
digital painting Music song
Listed by: psmyanmar
Other items listed by psmyanmar
Latest items listed by psmyanmar »
All times are GMT 6.5. The time now is 11:27 am.